Fivadihana fiara :: Nosokirina tao anaty kamiao izy dimy mianaka tra-doza • AoRaha
Fivadihana fiara Nosokirina tao anaty kamiao izy dimy mianaka tra-doza
Niala lalana sy nivarina tany an-tanimbary ny kamiao iray nandeha teny amin’ny lalam-pirenena fahafito, tany Antanimenakely, kaominin’Ilaka, any amin’ny distrikan’ Ambositra, afak’omaly hariva. Voatsindry tao anaty fiara ny mpamily sy ny vady aman-janany niaraka taminy.
Voatery nosokirina vao tafavoaka tao izy dimy mia­naka. Ireo ankizy mianadahy no voalaza fa voa mafy sady tena voatsindry tao. Naharitra ora iray teo ho eo ny namoahana azy mianadahy tao anaty fiara. Nitondra katsaka avy any Toliara nikasa hiana­varatra ny fiarabe niarahan’ ireto fianakaviana kely ireto. Ny raim-pianakaviana ihany no nitondra ny fiara. Nivadika ambony ambany ilay kamiao nony tonga tany Antanimena­kely Ilaka. Vory maro nijery ny zava-misy ny mponina teo amin’ny manodidina. Nifandrimbonan’izy ireo ny famoahana an’ireo niharam-boina avy tao anaty fiara. Nanampy ihany koa ny zandary tonga teny an-toerana.
«Zazakely mbola trotroin-dreniny ny iray tamin’ny zanak’ izy mivady niara-tra-doza tao anaty kamiao ireo. Valo sy folo taona ny ankizy roa tena voa mafy. Fiara nandalo no nampitondraina azy ireo namonjy hopitaly any Antsi­rabe», araka ny nambaran’ny mpitandro filaminana. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga ny loza. Tsy maintsy hohenoina ny mpamily amin’ny fotoana mahamety izany.
Tonga teny an-toerana, rehefa naheno ny loza, ny solontenan’ny fitondram-panjakana any amin’ny faritra Amoron’i Mania, nahitana ny solombavambahoaka sy ny Lehiben’ny faritra.
Ahiahy lonilony :: Lehilahy mpandraharaha voafirafira antsy